ध्रुबसत्यले किन लेखे ‘कैरन’ ? कारुणिक बयान (भिडियोसहित) | Nepal First Dalit Online News Portal: www.dalitonline.com
ध्रुबसत्यले किन लेखे ‘कैरन’ ? कारुणिक बयान (भिडियोसहित)
लेखक तथा साहित्यकार ध्रुवसत्य परियारद्वारा लिखित कथासंग्रह ‘कैरन’ शनिवार राजधानीमा सार्वजनिक भएको छ । साहित्यकार आहूति, डा अर्चना थापा र नागरिक दैनिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुईंटेलले सामूहिक रुपमा उक्त कथा संग्रह सार्वजनिक गरेका थिए । ध्रुबसत्यले कैरन किन लेखे ? उनले मार्मिक रचना गर्भ लेखेका छन् ।
आँखैमा झलझली, हितैको दौँतरी… ।
कुनै काम विशेषले स्याङ्जा चापाकोटदेखि पाल्पा खालीवन फुपूको घरमा गएको थिएँ । फागुन ७ गते, सिलुवाको मस्लाङ भन्ने ठाउँमा मेला लाग्दो रहेछ । फुपूका छोराहरूसँग म पनि मेला हेर्न गएँ । हामी थोरै दूरी कच्ची सडक ट्र्याक्टर चढ्यौँ । ट्र्याक्टरमा उही गीत बजिरहेको थियो— आँखैमा झलझली… ।
एसएलसीपछि काठमाडौं आएँ, कविता लेख्न थालेँ । बकपत्र कवितासंग्रहको भूमिकामा कवि श्रवण मुकारुङले लेखिदिए, ‘प्रेम उनको कविताको अर्को चाखलाग्दो विषय हो, तर अरुले झैँ उनले पनि प्रेमलाई मानिस, समाज र सिद्धान्तभन्दा माथि राख्न चाहेको देखिन्छ… ।’
म प्वाक्क बीचमा बोलेँ, ‘उहाँको त… ।’
१५–१६ को थिएँ । भर्खरै दसैँ–तिहार सकिएको थियो । घरनजिकै गाईवस्तु चराउन गएको थिएँ, सानो रेडियो लिएर । वनतिर गाई लगाएर एउटा काब्रोको रूखमा चढेँ । रेडियोमा नारायणगोपालको स्वर रहेको गीत बज्यो– एउटा मान्छेको मायाले कति… ।